RT-qPCR Series Suppliers na Factory |Ndị nrụpụta China RT-qPCR Series
RT-qPCR Easyᵀᴹ (Otu Nzọụkwụ) -SYBR Green I
◮Ngwa otu nzọụkwụ na-eme ntụgharị ntụgharị na qPCR mmeghachi omume abụọ n'otu tube, naanị ịkwesịrị ịgbakwunye RNA template, kpọmkwem PCR primers na RNase-Free ddH.2O.
◮Ngwa ahụ nwere ike nyochaa ngwa ngwa RNA nke ọma ma ọ bụ chọpụta RNA.
◮RT-qPCR dị mfeTM(Otu Nzọụkwụ) -SYBR Green I kit na-abịa na ROX n'ime ntụ ntụ ntụ, nke enwere ike iji wepụ ihe mgbaàmà na njehie mgbaàmà n'etiti olulu mmiri, nke dị mma maka ndị ahịa iji mee ihe n'ụdị dị iche iche nke akụrụngwa PCR.
RT-qPCR Easyᵀᴹ (Otu Nzọụkwụ) -Taqman
- Otu -kit nzọụkwụ na-enyere aka ntụgharị ntụgharị na PCR ka eme ya n'otu tube ahụ, naanị mkpa ịgbakwunye RNA template, kpọmkwem PCR primers na RNase-Free ddH.2O.
- Enwere ike ịme nyocha ọnụọgụ nke ezigbo oge nke RNA viral ma ọ bụ trace RNA ngwa ngwa na nke ọma.
- Ngwa ahụ na-eji reagent transcription pụrụ iche nke Foregene na Foregene HotStar Taq DNA Polymerase jikọtara ya na sistemu mmeghachi omume pụrụ iche iji melite arụmọrụ nkwalite na nkọwapụta nke mmeghachi omume ahụ nke ọma.
- Usoro mmeghachi omume kachasị mma na-eme ka mmeghachi omume nwee mmetụta nchọpụta dị elu, nkwụsi ike okpomọkụ siri ike, na ndidi ka mma.
- RT-qPCR dị mfeTM(Otu Nzọụkwụ) -Taqman kit na-abịa na ROX n'ime ntụ ntụ ntụ, nke a pụrụ iji wepụ mgbaàmà ndabere na mgbaama njehie n'etiti olulu mmiri, nke dị mma maka njedebe ndị ọrụ iji n'ụdị dị iche iche nke quantitative PCR ngwá ọrụ.